Wada-xaajoodyo wax ku ool ah oo ku saabsan Iran
Tani waa faallo ka tarjumeeysa aragtida dawlada Mareeykanka.
Wadahadallada ka socda Vienna ee ku saabsan soo noqoshada wadajirka ah ee u hogaansanaanta heshiiskii Nukliyeerka Iran ee JCPOA, ayaa socda. Maamulkii madaxweyne Trump waxa uu Mareykanku ka saaray heshiiskaas 2018, wuxuuna dib u soo celiyay cunaqabateyntii Iiraan, wuxuuna ku daray qaar cusub, tan iyo markaas Iran ma aysan ilaalin ballanqaadyadeedii heshiiska waxayna uga tagtay JCPOA isbeddel.
Hadda Iran iyo Mareykanka labaduba waxay muujiyeen ujeedo wadaag ah in lagu laabto iswaafajinta wadajirka shuruudaha JCPOA oo uu gudoominayay Midowga Yurub.
Wadahadaladan ku saabsan si loo gaaro himiladaas waxaa ka mid ah dalalka Iran, Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, iyo Ruushka iyadoo si dadban, laakiin muhiim ah uu uga qeyb galayo Mareykanka.
Shir jaraa'id oo uu qabtay afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka Ned Price wuxuu ku tilmaamay wada-xaajoodka "sida ganacsi oo kale ah oo hubaal ah, wuxuu yidhi xoogaa horumar ah ayaa jiray, laakiin weli waxaa harsan waddo dheer, waxaana u arkaa inay xaq tahay in la dhaho waxaan haysanaa waddo ka badan inta noo muuqato.”
Guddiga Wadajirka ah ee JCPOA ee kor kala socda wada-hadallada ayaa dhowaan ku dhawaaqay koox seddexaad oo khabiir ah oo ka shaqeyneysa si loo bilaabo in la eego sida ugu macquulsan ee loo kala qaadi karo tallaabooyinka kala duwan ee loo baahan yahay suurta-galnimada kusoo noqoshada Mareykanka ee JCPOA iyo fulinteeda buuxda oo wax ku ool ah .
Labada koox ee kale ee shaqeeya waxay wax ka qabanayaan qaadista cunaqabateynta iyo ku soo laabashada Iran ee u hoggaansanaanta ballanqaadkeeda nukliyeerka.
Afhayeen Price wuxuu soo dhoweeyay iclaamintaasi isagoo xusay in ergayga gaarka ah ee Mareykanka Robert Malley uu hogaaminayay wafdiga Mareykanka ee sahaminta habab dhab ah oo la xiriira talaabooyinka Iran iyo Mareykanka ay u baahan doonaan inay qaadaan si ay ugu laabtaan iswaafajinta wadajirka ah.
Mr. Price wuxuu cadeeyay in sida Lataliyaha Amniga Qaranka Mareykanka Jake Sullivan uu dhawaan ku yiri wareysi uu bixiyay "Mareykanka ma doonayo inuu qaado cunaqabateynta ilaa aan ka helno caddeyn iyo kalsooni in Iran ay si buuxda ugu laabaneyso fulinta waajibaadkeeda heshiiska, waxay daboolka ka qaadi doontaa barnaamijkeeda Nukliyeerka iyo inay yareyneyso heerarka naaxinta iyo baaxadda tayeenta uranium-ka.”
Afhayeenka Price wuxuu caddeeyay in is adeecid ay tahay waxa kooxda Vienna ay hadda diiradda saartay.